Somaliland oo masafurisay mas’uuliyiin u dhashay Imaaradka Carabta – Somali Top News
Somaliland oo masafurisay mas’uuliyiin u dhashay Imaaradka Carabta
January 18, 2019 Somali Top News	0 Comments
Xukuumadda Somaliland ayaa la sheegay inay hawlo ugaadhsi ah ka joojisay, islamarkaana cayrisay niman u dhashay dalka Imaaraadka Carabta, oo dhawaan socdaal ku yimid Somaliland.
Raggan u dhashay Imaaraadka Carabta, ayaa waxay socdaal ku tageen deegaano ka tirsan gobalka Saaxil, iyadoo dalxiisayaal u muuqday, waxase la sheegay inay hawlo ugaadhsi dhinaca shimbiraha ah ka bilaabeen deegaanadaas.
Wararka ayaa sheegaya in ay hay’adaha ammaanka Somaliland ka joojiyeen hawsha ugaadhsiga, ka dib markii ay dadka deegaanku soo wargeliyeen ciidamada ammaanka.
Kooxdan oo uu weheliyay wakiilka Somaliland ee dalka Imaaraadka Carabta, ayaa gelinkii dambe ee Arbacadii ka dhoofay madaarka Cigaal iyagoo ay tiradoodu ahayd 18 ruux
Inkastoo ay nimankani ka dhoofeen qolka VIP ee madaarka Hargeysa, haddana waxa la dareemayay in bixitaankoodu u muuqday qarbo-qarbo.
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Faratoon, oo arrintan waxa laga weydiiyey ayaa yidihi “Anigu cid la mustaafiyey iyo cid kale ma aqaano, mana maqal cid xoog lagu mustaafuriyey, laakiin waxa jiray nin Imaaraadka ah oo dalka joogay, oo arin yar la isku afgaran waayey, ee ciddina ma mustaafurin, xoogna laguma mustaafurin, ee isaga ayaa iskii u tagay”.
Wasiirka oo la weydiiyay waxa ka jira wararka sheegaya in nimankaasi ugaadhsanayeen qaar ka mid ah duur-joogta gobalka Saaxil, xukuumaduna ka joojisay, waxaanu Wasiir Faratoon yidhi “Waxay doontaba ha noqotee, haddii uu ninkaasi tagay, isaga ayaa iskii u tagay, kolay Dawladdu xoog kumay mustaafurin, mana maqal”
← Muxuu salka ku hayaa Khilaafka Muna Key iyo Xukuumadda Soomaaliya?
Ciidan Itoobiyaan ah iyo Al shabaab oo ku dagaalamay gobalka Baay →
Madaxweynihii hore ee DDSI oo ku xanuusanaya xabsiga uu ku xeran yahay
Xil. Faarax Sheekh C/qaadir oo sheegay dhaqanka cusub ee madaxda DF